Wasiir reer Tansaaniya ah oo ballan-qaaday in uu wanaajin doono Waaxda Duur-joogta - Sabahionline.com
Wasiir reer Tansaaniya ah oo ballan-qaaday in uu wanaajin doono Waaxda Duur-joogta Maajo 22, 2012
Wasiirka Khayraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska Tansaaniya Khamis Kagasheki ayaa Isniintii (21-ka May) ku dhawaaqay isbaddal lagu sameeyanayo Waaxda Duur-joogta, taasoo ka dhigan dadaal lagu wanaajinayo wax-qabadka waaxda.
“Waxaannu ogaannay in qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha waaxda ayan wax dan ah ka lahayn in ay u shaqeeyaan qaranka,” ayuu Kagasheki ka sheegay munaasabaddii lagu daah-furayay maamulka Adeegga Kaymaha Tansaaniya ee ka dhacday Darusalaam, sida uu qoray wargayska The Citizen ee kasoo baxa Tansaaniya.
Kagasheki waxa uu sheegay in Waaxda Duur-joogtu ay sameeyn jirtay dakhli, laakiin lacagtaasi laga weecin jiray in loo isticmaalo danaha guud ee shacabka. Xukuumaddu waxa ay joojisay in ay soo saarto ruqsadaha lagu daabbulo xayawaanka nool illaa iyo inta laga sameeynayo baaritaan buuxa.
Kagasheki, oo isagu qabtay xilkan ka dib isku-shaandhayn lagu sameeyay golaha xukuumadda biloowgii bishan, ayaa sidoo kale sheegay in ay nuqsaani ka jirtay saraakiisha aqoonta leh ee ka howl-gasha 33.5-ka milyan oo hiktar ee ay kaymaha Tansaaniya sida uu qoray wargayska The Guardian. Wasaaradda ayaa leh shaqaale gaaraya ku dhawaad 1,760 sarkaal, halka baahidu tahay qiyaasta 2,600 ayuu yiri Kagasheki.